Quora, यो के हो र यसले कसरी मार्केटर्सलाई फाइदा पुग्न सक्छ - Semalt ले उत्तर जान्दछ
के तपाईंले Quora को बारेमा सुन्नुभयो? यो एक वेबसाइट हो जहाँ तपाइँ प्राय: सबै प्रश्नहरूको उत्तर भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यी उत्तरहरू रमाईलो र रमाईलो पनि छन्, जुन, एक तरिकाले, Quora लोकप्रिय बनाएको छ। यो लाखौं प्रयोगकर्ताहरूको साथ एक वेबसाइट हो, तर अझै पनि हामी यसको प्रयोगहरू अन्डररेट भएको महसुस गर्दछौं।
वर्षौंको दौडान, हामीले देख्यौं कि सामाजिक मिडियाले उद्यमीहरूलाई उनीहरूको व्यवसायको विकास गर्न मद्दत गर्दछ। सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र ट्विटरले केहि उत्कृष्ट उदाहरणहरू प्रस्ताव गर्दछ। आज, लगभग सबै व्यवसाय मा एक माथिको माथि उल्लेखित एक वा बढी सामाजिक मिडिया संग एक खाता छ। यद्यपि त्यहाँ सुधारको लागि ठाउँ छ। यो गलत नहुनुहोस्; एक सफल मिडिया वेबसाइटमा एक सामाजिक मिडिया उपस्थिति महत्वपूर्ण छ; जहाँसम्म, यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट मा अधिक यातायात ड्राइव गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईंलाई अवसरहरू चाहिएक Quora द्वारा प्रदान गरिएको वेबसाइटको।
Quora अध्ययन गरेपछि, हामीले बुझ्यौं कि यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी हाम्रा ग्राहकहरूसँग कुरा गर्छौं। तपाईंले आफ्नो व्यवसाय सुरू गर्नु अघि, सम्भावनाहरू यो हुन् कि तपाईं सँग एक ग्रोथ योजना थियो। तर अब तपाईको व्यवसाय छ र चलिरहेको छ, तपाईले सायद यो पनि महसुस गर्नुहोला कि यस योजनाको लागि केहि समायोजनहरू हुनु आवश्यक छ। तपाइँले विकास योजनामा ​​गर्न सक्नुहुने उत्तम समायोजन मध्ये एक Quora मा एक मान्यता प्राप्त छ।
के अधिकांश ग्राहकहरूको लागि आश्चर्यको कुरा आउँछ जब उनीहरूले क्वेरा द्वारा मेरो साइटमा आकर्षण गरेको यातायातको मात्रा सिक्छन् वा साक्षी दिन्छन्। तपाईलाई पढ्ने जो यसलाई प्रयोग गर्दैनन् वा यसको बारेमा थाहा छैन, Quora एउटा मञ्च हो जहाँ कोही पनि प्रश्नहरू वा उत्तर दिन सक्छ। प्रश्नहरूको प्रश्न र विधाको कुनै सीमा छैन। "अंग्रेजी अक्षरहरू" जत्तिकै सरल प्रश्नहरू जस्ता जटिल प्रश्नहरू जस्तै "स्पेस रकेट बनाउने" जस्ता। यो एक प्लेटफर्म हो जहाँ तपाइँले केहि पनि फेला पार्न सक्नुहुन्थ्यो।
यो प्लेटफर्मले धेरै व्यावासायिकहरूलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्दछ भन्ने कुरा सिकेर Semalt का ग्राहकहरू अचम्ममा चकित भए।
अब तपाईलाई यति धेरै थाहा छ, तपाई किन फेला पार्नुहुन्न:
Quora प्रयोगको लागि नियमहरू
Quora सुरुमा फेसबुकको दुई पूर्व कर्मचारीहरु द्वारा स्थापित गरिएको थियो। तिनीहरूको नामहरू एडम डी 'एन्जेलो र चार्ली चेभर थिए, २०१० मा फिर्ता। तिनीहरूले जानकारीको लागि अन्तिम ठाउँको रूपमा सेवाको लागि क्यू र एक प्लेटफर्म कोरा गठन गरे।
कसै-कसैले यसलाई विकिपेडियामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धीको रूपमा पनि देखे, विशेष गरी यसको २०१२ पुन: निर्माण पछि। २०१ 2018 को रूपमा कहिले पनि कम क्वोराले २०० मिलियन मासिक प्रयोगकर्ताहरू अधिग्रहण गरिसकेका थिएनन्। प्रयोगकर्ताहरूले विश्वव्यापी रूपमा अनावश्यक क्षमताको साथ जानकारीको एक गुणस्तर स्रोतको रूपमा विचार गर्न थाले, र हामीले पनि।
दिमागमा कुनै खास लक्ष्य बिना नै, त्यहाँ Quora मा तपाइँको सदस्यता कायम गर्न को लागी केहि नियमहरू छन्।
खाता खोल्नुहोस्: तपाईंको व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रो चित्र प्रयोग गर्नुहोस्, बायो भर्नुहोस्, र शीर्षकहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं छलफल गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं याद गर्नुहुनेछ कि तपाईंको पहिलो पृष्ठ यी शीर्षकहरूमा प्रश्न र उत्तरहरूले भरिएको थियो। तपाईं शीर्ष-मूल्या content्कन गरिएको सामग्री स्रोतहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तिनीहरू फेला पार्न धेरै सजिलो छ। तपाईं केवल खोजीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको मनपर्ने शीर्षक इनपुट गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् " धेरै हेरिएका लेखकहरू"यसले तपाइँलाई तपाइँको लक्षित श्रोताहरू बीच के प्रचलनमा रहेको छ र तपाइँ कसरी तिनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा उत्कृष्ट विचारहरू दिन्छ।
सही प्रश्न र उत्तर छनौट गर्नुहोस्: जस्तै कसरी सही कुञ्जी शब्दहरूको सही जवाफको लागि छनौट गर्नुपर्दछ, त्यस्तै प्रश्नहरू र उत्तरहरू तपाईंले चयन गर्नुभएको Quora मा असफल कारक हुन सक्छ। प्रश्न र उत्तरहरू पत्ता लगाउनु जुन सब भन्दा चाखलाग्दो हुन्छ प्रयोगकर्ताहरूको लागि कुनै समस्या छैन। यदि तपाईं सहि ट्र्याकमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं फेला पार्न सक्नुहुनेछ र केहि क्लिकहरूसँग फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यो गर्दा, तपाईंले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ:
प्रश्न वा उत्तरले हेराई गरेको संख्या (कम्तिमा हजारौंमा गणना गरिएको)
उत्तरहरूको संख्या कम हुनुपर्दछ (तपाईंको उत्तरहरू उच्च दृश्यहरू प्राप्त गर्ने बढी संभावना दिदै)।
पोष्ट अनुयायी हुनु पर्छ।
यसलाई तपाईको रूचिको क्षेत्रमा राख्नुहोस्।
उच्च-गुणवत्ता सामग्री लेख्नुहोस्: वास्तविक प्रश्नहरूको जवाफ बिना नै, तपाईंको Quora खाताले तपाईंको वेबसाइटलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्दैन। खराबमा, यसले तपाईंको साइटबाट टाढा ट्राफिक तान्नेछ। यसलाई रोक्नको लागि, तपाईंलाई उच्च गुणको आवश्यक छ, श्रोताहरूका सान्दर्भिक उत्तरहरू। यदि तपाईं ध्यान पाउन चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ तपाईंको उत्तरको लागि गहिरो र प्रामाणिक अर्थ हुनु आवश्यक छ। ज्ञानको एक व्यापक स्पेक्ट्रमको साथ शीर्षकहरूमा फोकस गर्नुहोस्। यो कोउरामा "सबै ट्रेडहरूको ज्याक; को मास्टर ऑफâââââ।।" को उत्कृष्ट उदाहरण हो। यदि तपाईंलाई सबै कुरा थाहा छ जस्तो लाग्छ भने, तपाईं सायद शायद याद गर्नुहुनेछ। यहाँ, सटीक वाचवर्ड हो। तपाईंको Quora को शीर्षमा उत्रने समाधान तपाईंको उच्च क्षमताको upvotes हुने क्षमतामा निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँ भाग्यशाली १% मा एक हुनुहुन्छ भने Upvotes को अधिकतम संख्यामा बढ्नको लागि, Quora तपाइँलाई उनीहरूको गृह पृष्ठमा चित्रित गर्दछ। यसको मतलब तपाईको Quora प्रश्नको लागी २०० मिलियन दृश्य र तपाईको वेबसाइटमा !!! यद्यपि, तपाई सावधान हुनुहोस् Quora को कुनै पनि नियम तोड्न र प्रतिबन्धित हुने जोखिममा।
एक अनलाइन कम्पनीको रूपमा, हामी जान्दछौं कि हाम्रो बृद्धिका लागि सब भन्दा मूल्यवान चीजहरू मध्ये एक हाम्रो श्रोतालाई उत्तम रूपमा संलग्न गर्नु हो जुन हामी सकेसम्म राम्रो गर्न सक्छौं र हाम्रा सम्भावित ग्राहकहरूसम्म पुग्न सक्छौं। सोशल मिडिया त्यो गर्न एक उत्तम तरिका हो, तर Quora मा ठेस खाए पछि, हामी एक प्रयास गर्ने निर्णय गरे। हामी यसबाट कसरी प्रभावित हुन्छौं वर्णन गर्न आवश्यक छैन।
हामीले उल्लेख गरेझैं जति उन्नति र दृश्य तपाईंले पाउनुहुनेछ, क्योराको पहिलो पृष्ठमा चित्रित हुने सम्भावनाहरू त्यति नै राम्रो हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् यदि यी दृश्यहरू तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिकमा परिणत भए। यो सम्भव छ यदि तपाईंले आफ्नो उत्तरमा लिंक राख्नुभयो भने।
Quora को अनुपम लाभ
तपाई शीर्ष शिर्षक र तपाईको रूची भएका मानिसहरुको पालना गर्न सक्नुहुन्छ: तपाईको Quora खातालाई रमाईलो र उत्तम स्रोत बनाउनको लागि तपाईले केवल गहन ज्ञान भएका शीर्षकहरुमा बोल्नु पर्छ। तपाईको प्रतिक्रियामा स्पष्ट हुनुहोस् र "हो" वा "होईन" मात्र जवाफ दिने बेवास्ता गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईले गर्नु पर्छ सँधै त्यहाँ बाहिर जवाफ को प्रकार हेर्न तपाईको प्रश्न खोज्नुहोस् र ती उत्तरहरु लाई उत्तर दिनुहोला कि तपाई उत्तरहरु को लागी भरपर्दो स्रोत हो भनेर प्रमाणित गर्ने तरीकाको रुपमा छैन।
एक विशेषज्ञ बन्नुहोस्: शीर्षकहरूमा प्रासंगिक उत्तरहरू थप्नुहोस् जसमा तपाईं एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उचित हिज्जे, व्याकरण, क्यापिटलाइजेशन, र लिinking्क प्रयोग गर्नुहोस्। वरिपरि रहेका विचारहरूको आधारमा उत्तर नउठाउनुहोस् तर जवाफहरू प्रदान गर्नुहोस् जुन तपाईं पछाडि सक्नुहुन्छ। तपाईंको वरपरका अन्य विश्वसनीय स्रोतहरूबाट जान्नुहोस्, आदर र विचारशील हुनुहोस्।
तपाईंको प्रश्न पृष्ठ सुधार गर्नुहोस्: प्रश्नहरू सम्पादन गर्नुहोस्, यी प्रश्नहरूमा शीर्षकहरू थप्नुहोस्, र उत्तरहरू प्रदान गर्नुहोस्। प्रश्नहरू अन्वेषकमा कहिले पनि पुरानो हुँदैन, र तपाईंको उत्तर ल light्गको प्रकाशमा यस्ता प्रश्नहरू ल्याउन कारक हुन सक्छ। अरूलाई मदत गर्ने प्रेम विकास गर्नुहोस्।
क्राउडसोर्स आईडियाहरू: उत्पादन प्रतिक्रियाको लागि सोध्नुहोस् र तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई सर्वेक्षण गर्नुहोस्। तपाईंको ब्लगहरू र लेखहरूको लागि अनुसन्धान शीर्षकहरू जुन Quora मा धेरै जसो प्रश्नहरू सोधिन्छ।
सब भन्दा राम्रोबाट सिक्नुहोस्: Quora मा तपाईंको उत्तरहरूको गुणहरूले निकै लामो यात्रा गर्दछ। Quora प्रयोगकर्ताहरू सेलिब्रेटीहरू र सामाजिक मिडिया विज्ञहरूको दिमागमा ट्याप गर्न सक्दछन्।
शब्द प्राप्त गर्नुहोस्
मार्केटिंगमा सब भन्दा उपयोगी उपकरणहरू मध्ये एक विश्वलाई यसको बारे थाहा दिनु हो।
सबैभन्दा शक्तिशाली सिफारिश व्यवसायहरू एक साथीबाट अर्को साथीमा व्यक्तिगत रेफरल द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। जब कम्पनीले उत्साहित दर्शकहरू पाउन सक्दछन्, उनीहरू आफ्ना साथीहरूलाई त्यस्ता कम्पनीहरूको बारेमा बताउँदछन्, र उनीहरू आफ्ना साथीहरूलाई पनि भन्छन्। वाक्यांशहरू जस्तै "के तपाइँ Semalt जानुभयो? तिनीहरूले तपाइँको वेबसाइट को ख्याल राख्छन् अरू कसैले छैन"। यो व्यावहारिक रूपमा कुनै लागत बिना विज्ञापन हो। धेरै ठूला व्यवसाय भन्छन् कि उनकी सफलता केहि अन्य कारकहरु संग व्यक्तिगत सिफारिशहरु द्वारा सम्भव भएको थियो।
यदि तपाईं पर्याप्त अफलाईन सिफारिशहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, गुगल तपाईंको वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्ने एक जना हुनेछ। यो किन तपाईं अनलाइन ट्राफिक मात्र संग धेरै खपत हुँदैन।
तपाईंको वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। के तपाईं हालको ट्राफिकसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यदि तपाईं ती संख्या बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले यस सामग्रीको पूरा फाइदा लिनु आवश्यक छ।
Quora ले तपाईंलाई प्रश्नहरूको उत्तर दिएर तपाईंको वेबसाइट लिंक गर्न अनुमति दिन्छ; तसर्थ तिनीहरूले तपाईंको अन्तरदृष्टि र लाभदायक वेब सामग्री फेला पार्छन्। Quora मा सान्दर्भिक रहने एउटा अचम्म तरिका भनेको सँधै मार्केटिंग उत्पादन वा सेवाहरूको भन्दा तपाईंको ज्ञान र थप प्रस्ताव राख्नु हो। यसले तपाईंको दर्शकहरूलाई देखाउँदछ तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ केवल तपाईंको लाभको लागि होइन तर तपाईंको कम्पनी र पाठक दुवैको सामूहिक रुचि। यदि तपाईं देखाउँनुहुन्छ कि यो सबै नाफाको बारेमा छैन भने, तपाईं फर्म फलोअरर बेस सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको एसईओ प्रयासहरू धेरै सजिलो बनाउँदै।
जब अधिक ट्राफिकको लागि क्वोरामा भइरहेको बेला, तपाईंले आफ्नो वेबसाइटलाई सकेसम्म मोबाइल-मैत्री बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेछ। यो किनभने Quora को यातायात को 40०% मोबाइल उपकरणहरु बाट आउँछ। केवल केही महिना प्रयोगको साथ, तपाइँ कसरी तपाइँको फर्म अनुयायी आधार प्रकट हुँदैछ भनेर हेर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।